Maammituu Makuriyaa: Bu'aan koo boqonnaa sammuuti - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Mamitu Mekuria
Goodayyaa suuraa Aadde Maammituun deessuuwwan 120 ol ta'an kaampii Hammarressaatti dhadhaa diban
Aadde Maammituu Makuriyaa lammiilee lola daangaan qe'ee isaanirraa buqqa'aanii kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessa qubatanii jiran kumoota hedduun lakkaawaman tolaan biddeen nyaachisaa jiru.
Dararaa Oromoonni naannoo Somaaleerraa buqqa'anii kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessa jiran 600,000 ol ta'an kan dhagahan, kara waldaa itti waaqeffatanii ta'uu himu.
"Lubni waldaa keenyaa biddeen kajeelle jedhu buqqaatonni jedhanii wayita bohaa natti himan, jara kana buddeen nyaachisuu hin dadhabu jedheen dhaqee nyaachisuuf murteesse," jedhu.
"Namoonni tokko tokkos na deeggaranii yeroo duraa biddeen 6,000 Finfinnee fe'adheen halkan imalee barii kaampii Hammaarresaa gahe, wantin dhagahee fi wantin achitti arge wal hin argu.'' jechuun jalqabbi gargaarsa isaanii BBC'tti himan.
"Guyyaan dura kaampii Hammaarressaa gahe dubartii barii sa'aa 11'tti deessee osoo homaa hin nyaatiin shaayii fi daabboo eeggattu yoon argu baay'een gadde, nan bohee," kan jedhan aadde Maammituun dhadhaa xiqqoo qabatanii deemaniin marqaa marqeefii, dhadhaas dibeen deebi'e jedhu.
Gargaarsa isaanii marsaa tokkoon kan hin dhaabne Aadde Maammituun, marsaa lammaffaan dubartoota erga dahanii ji'a sadii hin caalle 120 ta'aniif marqaa marqanii mataa isaanittis dhadhaa dibaniiru.
Goodayyaa suuraa Aadde Maammituu buqqaatota kaampii keessa jiraniif buna yoo danfisan
Gargaarsa haadhummaa isaanii kanaan hanga ammaatti gara kaampiiwwaan buqqaatonni kunniin jiranitti yeroo shan deebi'aniiru.
Wiixata darbes bidden 10,000 konkolaataa FSR jedhamutti fe'achuun lammiilee kaampii Dirre Dhawatti argaman nyaachisaniiru. Wajjin oolanii bulanii, gadda isaaniif boohaniiru.
"Ani sooretti ta'een miti, wantan xinnoo qaburraa waa gochuu kootiin bu'aan argadhe inni guddaan boqonnaa saammuuti, baay'een gammada. Nama beela'e tokkon beela baase," jedhu aadde Maammituun.
Utuu danda'ameefii torbee torbeen deemanii nyaachisanii hawwiisanii ta'uus dubbatu.
Buqqaatonni kaampii gara garaa keessa jiran uummata jaalaala guddaa qabaniifi jaalallii fi eebbisaanii galaa akka ta'eef dubbatu.
Wallaga lixaa Ayiraatti kan dhalatan aadde Maammituun yeroo amma Finfinnee naannoo Gulalleetti mana nyaataa Kakuu Maammee jedhamu qabu.
''Ijoollummaa kootti nan yaadadha killee manaa guureen waadee namootan nyaachisa. Warren hojii mana keessaa hojjetan naan lolanii osoon bohuu abbaan koo dhufee, lammata akka natti hin buunee fi naman barbaade akkan nyaachisu itti himen. Ergasii ji'a ji'aan hanqaaquu zanbiilii tokko tokko bitanii naa fidu," jedhu aadde Maammituun
Ijoollummaa isaaniitti nama gargaaruu, namaa kennuu akka jaalatan Obboleessi isaanii gaazexessaa Hinseenee Makuriyaa ni yaadatu.
"Harmeen keenya nama namaaf naatuu fi gargaaruu jaallattudha, obboleettiin koos amala kana harmee keenyarraa dhaalu hin ooltu," jedha.
Hojii gargaarsaa kennaa jiran keessatti deeggarsi maatii isaanii guddaa ta'uufi abbaan warraa isaanii yaada isaanii heddu akka deeggaraniis dubbatu.
Buqqaatota kanaaf godoollee haatatu waanti keessa jiraatan akka barbaadamuufii namoonni akkuma isaanii buqqaatota kanaa nyaachisuun gammachuu argamu akka dhandhaman waamicha dhiheessaniiru.
Gara fuulduraattis bakka buqqaatonni Oromoo qubatan biroottis imaluun uummata isaanii nyaachiisuuf karoorfachuus nutti himaniiru.
Bakka bu'aan qubattoota Kaampii hammaarressaa dargaggoo Faahmii Abdii, gargaarsa Aadde Maammituun hawaasa Oromoo kaampii kana keessa jiraniif gochaa jirtutti heddu gammaduu dubbata.
''Halkaniifi guyyaa deemtee biddeen kuma hangaanaa fiddee uummata dharraa biddeenii qabu kana dharraa baafte, nyaachisaa ooltee wajjin bulti. Kophaa ishii haadha Oromooti, galanni ishee bilisummaa haa ta'un jedhaan'' jedha.
Image copyright Mamitu/Facebook
Goodayyaa suuraa Ijoolleen rakkoo xiin-sammuuf saaxilamaa jiru
Kaampiiwwan buqqaatonni kunniin keessa qubatan hunda keessatti da'imman kumaan lakkaawamantu argama. Wanti daa'imman kunniin argaa, dhagahaa fi jiraachaa jiran kun eenyummaa isaaniirratti dhiibbaan inni geessisuuf namni xiyyeeffannaa kenne waan jiru hin fakkaatu jedhu Aadde Maammituun.
"Achitti wantoota heddu na gaddisiisan keessa tokko da'imman du'a abbaa isaanii akkuma salphaatti walitti himan, wayee namni isaan biratti qalamuu, dubartoonni ija isaanii fulduratti gudeedamuu yoo dubbatan dhagahun bay'ee na gaddisiise," jedhu.
Finfinneetti deebi'anii Ijoollen kun haala keessa jiran akka dagataniif manneen barnootaa beekan irra deemanii kitaabota akka kadhatan dubbatu.
Namoonni tokko tokkos deeggarsa isaaniif godhaniin dabtaraafi qubeessa walitti qabanii, biddeena 3,000 itti dabalanii gara kaampii hammaaressaatti deebi'an.
Kaampicha keessattis buqqaatota ogummaa barsiisummaa qaban 14 argatan wajjiin daa'imman kana bakka jahatti qooduun haaluma rakkisaa keessa jiran keessatti yaadni isaanii waan nagaa, waan barumsaa akka yaaduufis hanga danda'an yaalaniiru.
Haala qabatamaa kaampiiwwan kana keessa jiruun garuu dararaan daa'imman irra gahuu fi dhiibbaa inni xiinsammuu isaanirraan gahu xiyyeeffannoo adda barbaada jedhu.